အောင်မြင်ဖို့တွေး ဘဝအရေး။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » အောင်မြင်ဖို့တွေး ဘဝအရေး။
Posted by Ma Ma on Aug 27, 2011 in Education | 12 comments
ရေးမိရေးရာ လက်စမ်းစာပေ၊ စာမေးပွဲ အမှတ်စာရင်း
“စာတွေ ခေါင်းထဲရောက်အောင် ကြိုးစားနေတာ။” :D
ဆယ်တန်းစာမေးပွဲဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာ အချိုးအကွေ့ကြီးတစ်ခုကို ဖြစ်စေနိုင်တာမို့ မိဘတွေမှာ သားသမီးတွေ ၁၀တန်း မရောက်ခင်ကတည်းက ၂နှစ်လောက်ကြိုတင်ပြီး သားသမီးပညာရေးအတွက် ငွေအားရော၊ လူအားပါ အစွမ်းကုန် စိုက်ထုတ်ကြိုးစားကြရပါတယ်။
၉တန်း-၁၀တန်း အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ကျူရှင်တွေကို လိုက်စုံစမ်းရပါတယ်။
စာစုသင်ဖို့ ဝိုင်းအတွက် လူစုရတာက တမျိုး။ စာစုသင်မယ့်နေရာကို ရှာကြရတာက တမျိုးနဲ့ အလုပ်တွေ များကြရတာပေ့ါ။
များသောအားဖြင့် ကျောင်းသားမိဘတွေဟာ ကိုယ့်ကလေးနဲ့ ဥာဏ်ရည်တူတဲ့ (သို့) ပိုတော် ပိုကြိုးစားတဲ့ ကလေးတွေနဲ့ပဲ စုပြီး ဝိုင်းသင်ချင်ကြပါတယ်။
၁၀တန်းရောက်မှ တက်ချင်တဲ့ဝိုင်း တက်လို့ရမယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။ ၉တန်းတုန်းက စုထားတဲ့ဝိုင်းနဲ့ပဲ ၁၀တန်းမှာ ဆက်ဝိုင်းကြရတာပါ။
ဒါကြောင့်မို့ သားသမီးတွေ ၈တန်းစာမေးပွဲ ဖြေပြီးပြီဆိုတာနဲ့ မိဘတွေခမျာ ၁၀တန်းအတွက် ကြိုတင်ပြီး ဗျာများကြရတော့တာပါပဲ။
အဲဒီလို ၂နှစ်လောက်ကြိုတင်ပြီး အားထုတ်ကြိုးပမ်းခဲ့ရတဲ့ ရလဒ်တွေမှာ ကောင်းတာလည်းပါ။ ဆိုးတာလည်းပါပေ့ါ။
ကောင်းတဲ့အထဲမှာတောင် တော့ပ်တန်းကနေ ရိုးရိုးအောင်ထိ အဆင့်အတန်းတွေ အမျိုးမျိုး ရှိသေးတာပေ့ါ။
ဆိုးတာကတော့ တစ်မျိုးတည်းပဲ ရှိပါတယ်။ ကျရှုံးခြင်းပေ့ါ။
စာမေးပွဲကျပြီ ဆိုတဲ့အခါကျတော့ မိဘနဲ့ သားသမီး စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်လာရပြီပေ့ါ။ ကလေးတွေအတွက်မှာလည်း မိဘက ဆူတာ ပူတာက တမျိုး၊ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် စာမေးပွဲကျလို့ စိတ်ညစ်တာက တမျိုးနဲ့ပေ့ါလေ။
အရင်ကတည်း စာကိုစိတ်မဝင်စားပဲ မကြိုးစားခဲ့တဲ့ကလေးတွေအတွက် သိပ်မထိခိုက်ပေမယ့်၊ တချို့ ကြိုးစားသော်လည်း စာမေးပွဲကျတဲ့ ကလေးတွေမှာတော့ စိတ်ဓာတ်ကျတယ်၊ ကျောင်းဆက်မတက်ချင်တော့ဘူး ဆိုတာမျိုး ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာတွေ ပေါ်လာတော့တာပါပဲ။
မိဘတွေအဖို့ရာမှာတော့ သားသမီးအရေးမို့ ငွေထပ်ကုန်တဲ့ကြားထဲကပဲ စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ သားသမီးကို ပြန်အားပေးပြီး သားသမီးအတွက် အစွမ်းကုန် ဖြည့်ဆည်းပေးလိုစိတ်နဲ့ နောက်တစ်နှစ် ကျောင်းပြန်တက်ဖို့ အစစအရာရာ ထပ်မံကြိုးစားရတော့တာပေ့ါ။
မိဘတွေက ငွေကြေးတောင့်တင်းရင် မထောင်းသာဘူးပေါ့။ ဒါတောင် တစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်က ထပ်ကုန်သွားရသေးတာ။ အချိန်ဆိုတာ ဝယ်ယူလို့မရနိုင်တဲ့ အဖိုးတန်တမျိုး မဟုတ်လား။
များသောအားဖြင့် စာမေးပွဲအောင်တဲ့ အမှတ်စာရင်းတွေသာ ထုတ်ယူတတ်ကြပြီး နောက်တက်ရမယ့် တက္ကသိုလ်တွေကို ရွေးဖို့၊ လျှောက်ဖို့ လုပ်ကြပါတယ်။ စာမေးပွဲကျတဲ့သူကတော့ အမှတ်စာရင်း ထုတ်လေ့ထုတ်ထ မရှိကြပါဘူး။
ဒီနေရာမှာ အကြံပေးချင်တာက စာမေးပွဲကျတဲ့သူတွေလည်း အမှတ်စာရင်းထုတ်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ဘယ်ဘာသာမှာ အားနည်းတယ်၊ အမှတ်ဘယ်လောက်ရတယ် ဆိုတာကို သိရပြီး၊ ဘယ်လို ပြန်ကြိုးစားရမလဲ ဆိုတာကို စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။
(အကယ်၍ အမှတ်စာရင်းမှာ အမှားအယွင်း ဖြစ်နေလျှင်လည်း သိနိုင်တာပေ့ါ။ ကိုယ့်ဖက်က ဖြေနိုင်လျှက်သားနဲ့ ကျတဲ့ဘာသာဆိုရင်တော့ အဖြေလွှာကိုပါ ပြန်တောင်းကြည့်သင့်ပါတယ်။)
အဲဒီလို သေသေချာချာ စနစ်တကျနဲ့ ကိုယ်အားနည်းတဲ့ ဘာသာကို ဖိပြီး ပြန်ကြိုးစားရင် အခုလာမယ့်နှစ်မှာ အောင်မြင်ဖို့ အလားအလာကောင်းတွေ၊ အောင်မြင်ဖို့ အခွင့်အရေးတွေ၊ အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နှစ်တာ စနစ်တကျ ပြန်လည်ကြိုးစားပြီး တသက်တာ အောင်မြင်တဲ့ဘဝတွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အမှတ်စာရင်းမှာ ကွန်ပျုတာက မှားရိုက်မိလို့ မှားသွားပြီး ဘ၀ပျက်ရတာမျိုးလဲ ရှိနိုင်တယ်လို့ တွေးမိတယ် ….
ဘာရယ်မဟုတ် … ၁၀ တန်းတုန်းက သင်္ချာအမှတ်ကို အခုထိ မကျေမနပ်ဖြစ်မိနေလို့ … တစ်မှတ်တန် တစ်ခုပဲမှားပြီး အကုန်လုံးအဖြေမှန်လို့ ၉၅ အထက်တော့ရမယ်လို့မှန်းထားတာ အမှတ်ထွက်တော့ ၈၉ ဖြစ်နေလို့ … ကျွန်မစိတ်ထဲ ၉၈ ကို ၈၉ နဲ့ မှားရိုက်တယ်လို့ အခုထိထင်နေတုန်း ..
ဆူး ကတော့ ၁၀တန်း အမှတ်စစ်တဲ့ ဆရာမ တွေကို ကျေးဇူးတင်တယ်။
၂ဘာသာ ဂုဏ်ထူးပါတယ် အံသြလွန်းလို့ အမှတ် စာရင်းထုတ်မှ သိတယ်.. ရေပြင်ညီ မှာ ညိနေလို့ ဂန်ထူးရသွားတာပါလားလို့..
အမှတ်စာရင်း တိကျမှုမရှိတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်ဆို တက္ကသိုလ်တက်တုန်းက ဘာသာတိုင်း မေးခွန်းကွက်တိရပြီး တနာရီအတွင်းအပြီးခိုးချဖြေပြီး အခန်းထဲကထွက် (အားလုံးပြီးမှဆို အိမ်အပြန်ဘတ်စ်ကားကျပ်လွန်းလို့) စာမေးပွဲခန်းစောင့်ဆရာကတောင် ဘယ်သူ့ဆီမှာ ကျူရှင်ယူလည်း လာမေးရတယ်။ အောင်တော့အမှတ်စာရင်းမှာ ၄၀တွေတန်းစီလို့…။
အဲလို အမှတ်စာရင်းမှားသွားရင်တော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀ဟာလည်း အများကြီးပြောင်းလဲမှုကို ဖြစ်စေမှာ အမှန်ပါပဲ။ ၁၀ တန်းဆိုတာ လူတစ်ယောက်ဘ၀ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အတွက် အဲလို အမှားအယွင်းမျိုးက ရှိတတ်မယ်တော့ ထင်ပါတယ်။ ရှိလာခဲ့ရင် ပြန်ပြင်စေပေးသလားဆိုတာလည်း သိချင်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် စာမေးပွဲကျရင်တောင် အမှတ်စာရင်းထုတ်ယူပြီး ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ဖြေနိုင်လျှက်နဲ့ ရတဲ့အမှတ်နဲ့ ကွာခြားမှုရှိနေတယ် ထင်ရင် အဖြေလွှာပါ တောင်းကြည့်ပါ။ အကယ်၍များ မှားနေတယ်ဆိုရင်၊ မှားနေတယ်ဆိုတာကို သိမှသာလျှင် ပညာရေးလောကက သိနားလည်သူများနဲ့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပြီး အဖြေမှန်ကို ရယူနိုင်မှာပါ။
I heardadifferent story.
There are2types of cheating in exam paper.
(1) Bribes give to the teacher ( who directly made exam paper correction ).
Those teachers even ask the ball pen used in the exam &
they directly write/fill the answers in the student’s exam paper.
(2) Bribes give to the chief examiner ( who do not make correction,
but he/she made the secret code of those exam paper &
he/she has access/authority to those papers ).
That chief examiner swap/change the code & paper of
good answer paper & bad answer paper.
မမ ရေ ဆယ်တန်းအဖြေလွှာတွေကိုတောင်းယူ၍ပြန်စစ်ခိုင်းလို့ တော့ရပါတယ်။ဒါပေမယ့်ပါမေက္ခများက သူ့ တို့ သိက္ခာကျတယ်ဆိုပြီးပေး မပြင်တော့ပါဘူး။ပြင်ပေးဖို့ လဲမရှိပါဘး။ပိုက်ဆံသာကုန်၍အပြောင်းအလဲမရှိပါ–
မြန်မာတွေရဲ့ အကျင့်စရိုက်လိုတောင် ပြောရမလို ဖြစ်နေပြီ။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီဆိုဒ်ထဲမှာ နေရင်းနဲ့ (သဂျီးရဲ့ သင်ကြားပြသမှုကြောင့်) မှားသွားရင် မှားတာကို ဝန်ခံပြီး တောင်းပန်တတ်အောင် လေ့ကျင့်နေပါတယ်။
လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်မှားရင် မှားတာကို မသိချင်ဟန်မဆောင်ပဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တာဝန်ခံဖို့၊ တာဝန်ယူဖို့ စိတ်ဓာတ်တွေကို ပြုပြင်သင့်ပါတယ်။
တော်ဝင် သူရဲကောင်း says:
ပြင်ပေးမယ် မထင်ပါဘူး ဗျာ
အမှတ်စာရင်းဆိုလို့ ဆယ်တန်းတုံးက Bio အရမ်းဖြေနိုင်ပါတယ်။အလွန်ဆုံးမှားရင် စာလုံးပေါင်းလေး မှားမိတဲ့၎-၅မှတ်လောက်ဘဲမို့ ဒီကတော့ သေချာတယ်။၉၀ အပေါ်ရမယ် ထင်ထားတာ ဒီရတဲ့ထဲမှာBioမပါလာပါဘူး၊အမှတ်သိရတော့ ၆၈ဘဲရတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်းအံ့သြတယ်။BIOဆရာကလည်း နောင်နှစ်များစွာကြာတဲ့အထိတွေ့တိုင်း နင်ဘာလို့ ဒီမပါလဲ ငါစဉ်းစားမရဘူးလို့ အမြဲပြောပါတယ်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်လောက်မှာ ဆယ်တန်းအဖြေလွှာတွေတောင်းကြည့်လို့ ရတဲ့နှစ်မှာ အသိတစ်ယောက်ရဲ့ကလေးက အမှတ် ၈၄ကို မှားပြီး ၄၈ ရေးထားတာတွေ့လို့ ပြန်ပြောလို့ အမှတ်မှန်ပြန်ရပြီး ဆေးကျောင်းဝင်သွားပါတယ်။
အဲဒီ သတင်းကြားတော့ ငါတုံးကလည်းဒီလိုများ ဖြစ်ခဲ့သလားလို့ တွေးမိတိုင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။
အခု တရားတော်တွေ သင်ယူရလာတော့ ဒီလိုဖြစ်ခဲ့မိရင်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ အကုသိုလ် အကျိုးပေးတာဘဲလို့ စိတ်ကိုဖြေနိုင်လာပါတယ်။
အင်းအဲဒါမျိုးအမှားတော့မကြားဖူးလို့ ပါ။ရှိခဲ့မယ် ဆိုရင်လဲ နစ်နာရသူတွေခမျာ စိတ်မကောင်းစရာပါ။စိစစ်မှုအား. သိပ်နည်းတာဘဲ။စိတ်ကုန်ပါတယ်. မြန်မာပြည်ပညာရေးစနစ်ကိုက—
ထင်တော့ထင်သားပဲ ဒါကြောင့် တညင်သားလဲ ခဏခဏဖြေတယ် ခဏခဏကျတယ် ..:P
အဲဒီအဖြေလွာတွေ ကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတယ် တချို့ဆို တော်တော်ရီရတယ် ဘာတွေဖြေထားမှန်းမသိဘူး ဖြေထားတာ နှစ်တွေကြာမှ ကိုယ့်အဖြေလွာတွေ ပြန်ဖတ်ရရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားမရစိတ်တွေ ရှိနေမှာ အသေချာပဲ…